ကြှနျုပျတို့အကွောငျး > ဂျေ Tkach ကနေန်ထမ်းပေးစာ > ကို MB 2015 စက်တင်ဘာလ
ကျွန်ုပ်တို့သည်မှောင်မိုက်နှင့်မရင်ဆိုင်မှီတိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်အလင်းကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောထားကြသည်။ သို့သော်အလင်းမရှိဘဲမြင်နိုင်သောအရာမရှိပါ။ အခန်းတစ်ခန်းကိုအလင်းထွန်းလင်းပေးသောအခါကျွန်ုပ်တို့သာမြင်နိုင်သည်။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိသို့ရောက်သောအခါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံကြောအာရုံကြောများကိုလှုံ့ဆော်ပေးပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်အာကာသအတွင်းရှိအရာဝတ္ထုတစ်ခု၊ အသွင်အပြင်တစ်ခု၊ အနေအထားနှင့်လှုပ်ရှားမှုတို့ဖြင့်အသိအမှတ်ပြုသောအချက်ပြမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အလင်း၏သဘောသဘာဝကိုနားလည်ရန်ခက်ခဲသည်။ အစောပိုင်းသီအိုရီများသည်အလင်းကိုအမှုန်တစ်ခုအဖြစ်၊ ယနေ့ရူပဗေဒပညာရှင်အများစုသည်အလင်းကိုလှိုင်းအမှုန်အဖြစ်နားလည်ကြသည်။ အိုင်းစတိုင်းရေးသားခဲ့သည့်အချက်ကိုသတိပြုပါ - တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သီအိုရီတစ်ခုနှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အခြားတစ်ခုကိုအသုံးပြုရပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်၎င်းကိုသုံးနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့နားမလည်နိုင်တဲ့ပုံစံအသစ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကွဲလွဲနေသောအဖြစ်မှန်နှစ်ခုရှိသည်။ တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်၎င်းတို့နှစ်ခုစလုံးသည်အလင်း၏အသွင်အပြင်ကိုအပြည့်အဝရှင်းပြနိုင်သော်လည်းအတူတကွလုပ်ဆောင်ကြသည်။
Ein interessanter Aspekt über die Natur des Lichts ist, wieso Dunkelheit keine Macht über sie hat. Während Licht Dunkelheit vertreibt, trifft es umgekehrt nicht zu. In der Heiligen Schrift spielt dieses Phänomen, hinsichtlich der Natur Gottes (dem Licht) und dem Bösen (der Dunkelheit oder Finsternis), eine auffallende Rolle. Beachten Sie, was der Apostel Johannes in 1. ဂျိုဟန် 1,5-7 (HFA) schrieb: Das ist die Botschaft, die wir von Christus gehört haben und die wir euch weitersagen: Gott ist Licht. Bei ihm gibt es keine Finsternis. Wenn wir also behaupten, dass wir zu Gott gehören und dennoch in der Finsternis der Sünde leben, dann lügen wir und widersprechen mit unserem Leben der Wahrheit. Leben wir aber im Licht Gottes, dann sind wir auch miteinander verbunden. Und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld.
Der dreieine Gott, das ewigwährende Licht, ist die Quelle aller «Erleuchtung», sowohl körperlich als auch geistig. Der Vater, der Licht ins Dasein rief, hat seinen Sohn gesandt, um das Licht der Welt zu sein, und der Vater und der Sohn senden den Geist, um die Erleuchtung zu allen Menschen zu bringen. Obwohl Gott «in einem unzugänglichem Licht wohnt» (1. တိ 6,16), hat er sich selbst durch seinen Geist, im «Angesicht» seines menschgewordenen Sohnes, Jesus Christus, uns offenbart (siehe 2. ကောရိန္သု 4,6). Selbst wenn wir anfangs argwöhnisch blicken müssen, um dieses überwältigende Licht «sehen» zu können, so erkennen diejenigen, die es in sich aufnehmen, bald, die Dunkelheit wurde weit und breit vertrieben.